ဩစတြေးလျနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဩစတေးလျနိုင်ငံ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
"ဩစတြေးလျ" ကို ဤနေရာသို့ ညွှန်းသည်။ အခြား အသုံးအနှုန်းများ အတွက် ဩစတြေးလျ (သံတူကြောင်းကွဲ) တွင်ရှုပါ။
ကိုဩဒိနိတ်: 25°S 133°E﻿ / ﻿25°S 133°E﻿ / -25; 133
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ ဩစတြေးလျ ဓနသဟာယ နိုင်ငံဟု ခေါ်ဝေါ်ပြီး ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာ့အသေးဆုံးတိုက်ဖြစ်သော ဩစတြေးလျတိုက်၊ တက်စမေးနီးယားကျွန်းမကြီး၊ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ ကျွန်းစုပေါင်းများစွာ ပါဝင်သည်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှာ မြောက်ဘက်၌ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ အရှေ့တီမောနိုင်ငံနှင့် ပါပူအာနယူးဂီနီနိုင်ငံ၊ အရှေ့မြောက်ဘက်၌ ဆော်လမွန်ကျွန်းစုများ၊ ဗနွားတူနိုင်ငံနှင့် နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နိုင်ငံတစ်ခုတည်းက တိုက်တစ်ခုလုံးကို နေရာယူထားသော တိုက်ဟူ၍ ဩစတြေးလျတစ်ခုသာ ရှိသည်။
နိုင်ငံတော် သီချင်း: Advance Australia Fair[N ၁]
ဩစတေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံ (အန္တာတိကတိုက်ရှိ ကြေညာထားသော ဩစတေးလျနယ်မြေ အပါအဝင်)
ဖက်ဒရယ် ပါလီမန် စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်
လွတ်လပ်သော ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်းမှ
• ဖက်ဒရယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ
၁၉၀၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်
၁၉၈၆ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်
၇,၆၉၂,၀၂၄ km2 (၂,၉၆၉,၉၀၇ sq mi) (အဆင့်: ၆)
၁.၇၉ (၂၀၁၅ ခုနှစ်အရ)
• ၂၀၂၂ ခန့်မှန်း
ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၁"။ (အဆင့် - 53)
[convert: မရေရာသော ကိန်းဂဏန်း] (အဆင့် - ၁၉၂)
$၁.၄၁၆ ထရီလီယံ (အဆင့် - ၁၈)
$၅၄,၈၉၁ (အဆင့် - ၁၇)
$၁.၆၁၈ ထရီလီယံ (အဆင့် - ၁၂)
$၆၂,၇၂၃ (အဆင့် - ၉)
အလယ် · 16th
ဩစလေးလျ ဒေါ်လာ ($) (AUD)
မတူကွဲပြားသော[N ၃] (UTC+8; +9.5; +10)
မတူကွဲပြားသော[N ၃] (UTC+8; +9.5; +10;
ဩစတြေးလျ ကုန်းမကြီးပေါ်တွင် ဩစတြေးလျ နေရင်းလူမျိုးတို့ နေထိုင် လာခဲ့ကြ သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၄၂၀၀၀ ကျော်မျှ ရှိပြီဖြစ်သည်။ မြောက်ဘက်အရပ်မှ တံငါသည်များ တစ်ခါတစ်ရံလာရောက်မှုနှင့် ဥရောပမှ ဒတ်ချ်လူမျိုး စူးစမ်းရှာဖွေသူတို့၏ ၁၆၀၆ ခု ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု အပြီးတွင် ဩစတြေးလျအရှေ့ခြမ်းကို ဗြိတိသျှတို့က ပိုင်နက်အဖြစ် ၁၇၇၀ တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ အစကနဦးပိုင်းတွင် ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၁၇၈၈ မှ အစပြု၍ နယူး ဆောက်ဝေး ကိုလိုနီဒေသသို့ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူတို့အား ပို့လွှတ်ရာ ဒေသအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်တို့ စတင် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ လူဦးရေ တိုးပွားလာပြီး နယ်မြေသစ်များ ရှာဖွေတွေ့ရှိ လာသည်နှင့်အမျှ ၁၉ ရာစုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှ၏ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ရသော ရေမြေခြား ကိုလိုနီတိုင်းကြီး ၅ တိုင်းကို ထပ်မံ တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် ၁၉၀၁ တွင် ကိုလိုနီတိုင်းကြီး ၆ တိုင်းကို ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖြင့် ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ဩစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံကို ထူထောင်ခဲ့သည်။
၃.၁ အစိုးရ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ ခွဲဝေသတ်မှတ်ပုံ
၃.၁.၁ ဥပဒေပြုရေး အာဏာ
၃.၁.၂ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ
၃.၁.၃ တရားစီရင်ရေး အာဏာ
၄ ပြည်နယ်များနှင့် ဒေသကြီးများ
၄.၃ တောင်ပိုင်း ဩစတြေးလျ ပြည်နယ်
၄.၄ တက်စ်မေးနီးယား ပြည်နယ်
၄.၅ ဝိတိုရိယ ပြည်နယ်
၄.၆ အနောက်ပိုင်း ဩစတြေးလျ ပြည်နယ်
၄.၇ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသကြီး
၄.၈ ဩစတြေးလျ မြို့တော် ဒေသကြီး
၉ နေထိုင်သူ လူမျိုးများ
၉.၁ ကနဦးနေထိုင်သူ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ
၉.၂ အစောပိုင်း ဝင်ရောက်အခြေချ ဥရောပသားများ
၁၃ ရိုးရာဓလေ့များနှင့် အထိမ်းအမှတ်များ
၁၃.၁ ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားများအတွက် နေ့ကြီးရက်ကြီးများ
၁၃.၁.၁ ဩစတြေးလျနေ့ (Australia Day)
၁၃.၁.၂ အန်းဇာက်ခ်နေ့ (Anzac Day)
၁၃.၂ ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် လူမျိုးစုများကို ကိုယ်စားပြုသော အလံများ
၁၃.၂.၂ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ အက်ဘော်ရစ်ဂျင်နယ် (Aboriginal) အလံ
၁၃.၂.၃ တောရက်စ် ရေလက်ကြားကျွန်းသား (Torres Strait Islander) အလံ
၁၃.၃ ဓနသဟာယ တံဆိပ်အမှတ်အသား
၁၃.၄ ဩစတြေးလျနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသောပန်း
၁၃.၅ ဩစတြေးလျနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသော အရောင်များ
၁၃.၆ ဩစတြေးလျနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသော ကျောက်မျက်
Australia ဟူသောစကားလုံးသည် လက်တင်ဘာသာစကား australis မှ ဆင်းသက် လာသည်။ တောင်ပိုင်း "southern" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ရောမခေတ်က "unknown land of the south" အမျိုးအမည် မသိသေးသော ကမ္ဘာ့တောင်ပိုင်းကုန်းမြေ (terra australis incognita) ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြကြောင်း ဒဏ္ဍာရီလာပုံပြင်များအရ သိရှိရသည်။ ခိုင်လုံသော အထောက်အထား မှတ်တမ်းအနေဖြင့် ၁၆၂၅ခုနှစ်တွင် မာစတာ ဟက္ကလွတ် ရေးသားသော "A note of Australia del Espíritu Santo" စာအုပ်တွင် Australia ဟူသောစကားလုံးကို သုံးနှုန်းထားကြောင်း ပထမဆုံး တွေ့ရှိရသည်။ ၁၆၃၈ ခုနှစ်တွင် ဩစတြေးလျမြေပေါ်သို့ ပထမဆုံး အခြေချခဲ့သော ဒတ်ချ်အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ၏ မှတ်တမ်းများတွင် Australische ဟု ရေးသားသုံးနှုန်းခဲ့ကြသည်။ Australia ဟူသော စကားလုံးကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာကြသည်မှာ ၁၈၀၄ ခုနှစ်ရောက်မှ ဖြစ်သည်။ မက်သယူး ဖလင်းဒါးစ်က ၁၈၁၄ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသော A Voyage to Terra Australis ဟူသည့် စာတမ်းများနှင့် ရေပုံများတွင် စတင်သုံးစွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၈၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှ တရားဝင် စတင်ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ၁၈၂၄ ခုနှစ်တွင် Admiralty မှ သဘောတူလက်ခံပြီး ဩစတြေးလျတိုက်ဟု တရားဝင် ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၄၀,၀၀၀ မှ ၆၀,၀၀၀ ကြားခန့်လောက်ကတည်းက ဩစတြေးလျတိုက်တွင် လူသားတို့ စတင်အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဟု ပညာရှင်များ တွက်ဆကြသည်။ ကုန်းမြေ အနေအထား အနီးဆုံးဖြစ်သော အရှေ့တောင်အာရှဒေသမှ ပင်လယ်ကိုဖြတ်သန်းကာ ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။ ၁၈ ရာစုနှစ် ဥရောပတိုက်သားများ စတင်ရောက်ရှိလာချိန်အထိ အဆိုပါ ဒေသခံ ဩစတြေးလျ တိုင်းရင်းသားများမှာ အမဲလိုက်ခြင်း၊ ယာဇ်နတ်ပူဇော်ပသခြင်းတို့ဖြင့်သာ အသက်မွေးကြကြောင်း မှတ်တမ်းများအရ သိရှိရသည်။
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအပေါ်အခြေခံထားသော စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်၏ အကြီးအကဲမှာ ဒုတိယမြောက် အဲလီဇဘက် ဘုရင်မကြီး ဖြစ်သည်။ ဘုရင်ခံချုပ်တွင် အာဏာရှိသော်လည်း သာမန်အားဖြင့် ဝန်ကြီးချုပ်မှသာ နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်သည်။ သို့ရာတွင် ဘုရင်ခံချုပ်သည် ဝန်ကြီးချုပ်ကို ကျော်လွန်၍ အာဏာသုံးပိုင်ခွင့် ရှိကြောင်းကို ၁၉၇၅ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အကျပ်အတည်းဖြစ်ချိန်တွင် ဘုရင်ခံချုပ်က ဝတ္တလမ်အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းပစ်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပြသခဲ့သည်။ အစိုးရတွင် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း သုံးရပ်ရှိသည်။ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးတို့ဖြစ်ကြသည်။
အစိုးရ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ ခွဲဝေသတ်မှတ်ပုံပြင်ဆင်
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် အစိုးရ၏အချုပ်အခြာအာဏာကို ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့က ချုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိစေရန် အောက်ပါအတိုင်း အစိုးရ၏ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ သုံးခုကြားတွင် ခွဲဝေအုပ်ချုပ်စေသည်။ ထိုအစိုးရ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ သုံးဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများမှာ ဥပဒေပြုရေး အာဏာ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ နှင့် တရားစီရင်ရေး အာဏာတို့ဖြစ်ကြသည်။
လွှတ်တော်သည် ဥပဒေပြုရေး နှင့် ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိသည်။ ၎င်း လွှတ်တော်ကို ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ဥပဒေပြုရေးကပြဋ္ဌာန်းထားသော တရားဥပဒေများကို အကောင်ထည်ဖော် အသက်သွင်းရန်အလုပ်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာဖြစ်သည်။ ထိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ဝန်ကြီးများနှင့် ဘုရင်ခံချုပ်တို့ပါဝင်သည်။ ဝန်ကြီးတစ်ဦးစီသည် အစိုးရဌာနတစ်ခု၊ သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသောဌာနများကို တာဝန်ယူကြရသည်။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် တရားသူကြီးများသည် တရားဥပဒေကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန်နှင့် လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖော်ဆောင်ရန် အခွင့်အာဏာရှိသည်။ တရားရုံးနှင့် တရားသူကြီးများသည် လွှတ်တော်နှင့် အစိုးတို့၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်မရှိသော တရားစီရင်ရေးအတွက် သီးသန့်တည်ရှိသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ပါလီမန်တွင် လွှတ်တော်နှစ်ရပ် ပါဝင်သည်။ အထက်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ (၇၆) နေရာနှင့် အောက်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ (၁၅၀) နေရာတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပါလီမန်မှ အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခေါင်းဆောင်မှာ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးပါတီ အဓိကပြိုင်ဘက် ပါတီနှစ်ခုရှိသည်။ ဩစတြေးလျန်း လေဘာပါတီနှင့် နှစ်ပါတီ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့တို့ ဖြစ်သည်။ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့တွင် လစ်ဘရယ်ပါတီနှင့် နေရှင်နယ်ပါတီတို့ ပူးပေါင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သဂရင်းနှင့် ဩစတြေးလျန်းဒီမိုကရက်တို့ ကဲ့သို့သော အခြားနိုင်ငံရေး ပါတီငယ်များလည်း ရှိသေးသည်။
ပြည်နယ် (၆)ခုရှိသည်။ နယူးဆောက်သ်ဝေးလ်စ် (New South Wales - NSW)၊ ကွင်းစ်လန် (Queensland - QLD)၊ တောင်ပိုင်း ဩစတြေးလျ (South Australia - SA)၊ တက်စ်မေးနီးယား (Tasmania - TAS)၊ ဝိတိုရိယ (Victoria - VIC)၊ အနောက်ပိုင်း ဩစတြေးလျ (Western Australia - WA) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင် အဓိက ဒေသကြီး နှစ်ခုရှိသည်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသကြီး (Northern Territory - NT) နှင့် ဩစတြေးလျ မြို့တော် ဒေသကြီး (Australian Capital Territory - ACT) တို့ဖြစ်သည်။
နယူးဆောက်သ်ဝေးလ်စ်ပြည်နယ်သည် ဗြိတိသျှလူမျိုးတို့ ကိုလိုနီနယ်မြေ စတင်ထူထောင်ခဲ့သော ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့တော် ဆစ်ဒနီမြို့သည် နယူးဆောက်သ်ဝေးလ်စ်ပြည်နယ်တွင်း မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကျော် ဆစ်ဒနီ ဟာဘာဘရစ်ဂျ် (Harbour Bridge) - ဆိပ်ကမ်းတံတား နှင့် ဆစ်ဒနီ အော်ပရာဟာက်စ် (Opera House) ပြဇာတ်ရုံတို့မှာ ဆစ်ဒနီမြို့တော်၏ အထင်ကရနေရာများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းပြည်နယ်တွင်း၌ အက်ဘော်ရစ်ဂျင်နယ် (Aboriginal) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုနွယ်များ အများဆုံးနေထိုင်ကြသည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ကွင်းစလန်ပြည်နယ်
ကွင်းစလန်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်မှာ ဘရစ်စဘန် (Brisbane) မြို့ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ အကြီးဆုံး ကွင်းစလန်ပြည်နယ်၏ မြောက်ဘက်တွင် တောရက်စ် ရေလက်ကြားကျွန်းများ၊ အပူပိုင်းအမြဲစိမ်းသစ်တောများ၊ အပူချိန် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ကမ်းရိုးတမ်း နေရာများ နှင့် ရာသီလိုက် ခြောက်သွေ့ကုန်းတွင်းပိုင်း တို့ ရှိကြသည်။ ဤ ပြည်နယ်တွင်း၌ ကမ္ဘာတွင်နာမည်ကြီးသော မဟာ ဘယ်ရီယာ သန္တာကျောက်တန်းကြီး (Great Barrier Reef) သည် အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတမ်းတစ်လျှောက် သွယ်တန်းလျက်ရှိသည်။
တောင်ပိုင်း ဩစတြေးလျ ပြည်နယ်ပြင်ဆင်
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - တောင်ဩစတြေးလျပြည်နယ်
တောင်ပိုင်း ဩစတြေးလျ ပြည်နယ်သည် ကျောက်ဆောင်ကမ်းပါး ပေါများထူထပ်သည်။ လူသိများကျော်ကြားသော ဝိုင်အရက်များ ထွက်သည့် နေရာများရှိသည်။ ၎င်းပြည်နယ်၏ မြို့တော်မှာ အယ်ဒန်(လ်)လေ (Adelaide) ဖြစ်ပြီး ကိုလိုနီခေတ်ချိန်က တည်ဆောက်ထားခဲ့သော ဗိသုကာလက်ရာမွန်များစွာ ကျန်ရစ်တည်ရှိဆဲဖြစ်သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - တက်စမေးနီးယားကျွန်း
တက်စ်မေးနီးယား ပြည်နယ်သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ အသေးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ပြီး၊ 'ဘေ့စ် စထရိတ်' ရေလက်ကြား (Bass Strait)က ထိုပြည်နယ်နှင့် ပင်မ ဩစတြေးလျတိုက်ကုန်းမြေကို ပိုင်းခြားထားသည်။ တက်စ်မေးနီးယားကျွန်းမြေပေါ်တွင် လူအနည်းစုသာနေထိုင်သည့် အပြင်လူသူ အရောက်အပေါက် နည်းသဖြင့် တော်တော်များများ ကုန်းမြေများမှာ သဘာဝ အတိုင်းရှိ၍ လူတို့၏ဒဏ် မခံရပေ။ တက်စ်မေးနီးယား ပြည်နယ်၏ မြို့တော်မှာ ဟိုးဘတ်ထ် (Hobart) ဖြစ်သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ဝိတိုရိယ ပြည်နယ်
ဝိတိုရိယ ပြည်နယ်မှာ ဩစတြေးလျတိုက်၏ ကုန်းတွင်းပိုင်းပြည်နယ်များတွင် အသေးဆုံးပြည်နယ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုပြည်နယ်တွင် ၁၈၅၀ ခုနှစ်များတွင်း ရွှေထွက်စဉ်ကာလများက တည်ဆောက်ထားခဲ့သော အလွန်ကောင်းမွန်လှသည့် ဗိသုကာလက်ရာများ လည်းရှိသည်။ ဝိတိုရိယ ပြည်နယ်၏ မြို့တော်မှာ မဲလ်ဘုန်း (Melbourne) ဖြစ်သည်။
အနောက်ပိုင်း ဩစတြေးလျ ပြည်နယ်ပြင်ဆင်
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - အနောက်ဩစတြေးလျပြည်နယ်
အနောက်ပိုင်း ဩစတြေးလျ ပြည်နယ်သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် သဲကန္တာရကြီးများရှိပြီး၊ အနောက်တောင်ဘက်တွင်မူ မြေဩဇာကောင်း၍ ကောက်ပဲသီးနှံ စိုက်ပျိုးရန် သင့်တော်သည့်အပြင်၊ ဝိုင်အရက်ချက်သည့် စပျစ်ပေါရာတည်နေရာဖြစ်သည်။ ထိုပြည်နယ်တွင် အဓိကအားဖြင့် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကွက်များကိုလုပ်ကြသည်။ ပြည်နယ်လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ လေးပုံသုံးပုံမှာ ၎င်းပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သော ပတ်သ်မြို့ (Perth) တွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - မြောက်ဩစတြေးလျပြည်နယ်
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသကြီး၏ မြောက်ဘက်တွင် အပူပိုင်းကုန်းမြေနှင့် တောင်ဘက်တွင် မြေနီ သဲကန္တာရတို့ရှိကြသည်။ လူဦးရေနည်းပြီး အများစုမှာ ထိုပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဒါရ်ဝင်မြို့ (Darwin)တွင် နေထိုင်သည့်အပြင် ၎င်းဒါရ်ဝင်မြို့ နှင့် အဲလစ်စပရင်းစ် (Alice Springs)မြို့ကြားရှိ အဝေးပြေးကားလမ်းကြီးတလျောက်တွင် နေထိုင်ကြသည်။ အဲလစ်စပရင်းစ် (Alice Springs)မြို့သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံအလယ်တဝိုက်တွင် ခရီးသွားများ အလည်သွားရာ နာမည်ကြီး မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်သည်။
ဩစတြေးလျ မြို့တော် ဒေသကြီးပြင်ဆင်
ဩစတြေးလျ မြို့တော် ဒေသကြီး၏တည်နေရာသည် ဆစ်ဒနီမြို့ နှင့် မဲလ်ဘုန်းမြို့ကြားတွင်တည်ရှိသည်။ ဩစတြေးလျ မြို့တော် ဒေသကြီးဟုဆိုသည့်အတိုင်း ဩစတြေးလျနိုင်ငံ မြို့တော် ကန်ဘာရာ တည်ရှိရာပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမြို့တော် ကန်ဘာရာသည် လွှတ်တော် 'ပါလီမန် ဟောက်စ်' (Parliament House) နှင့် ဗဟိုတရားရုံး 'ဟိုင်းကော့တ်' (High Court) တို့ကဲ့သို့သော အရေးကြီးသည့် နိုင်ငံတော် အထင်ကရ အဖွဲ့အစည်းများ ရုံးစိုက်ရာ အရပ်ဖြစ်သည်။
ဩစတြေးလျ မြို့တော် ဒေသကြီးအလံ
ဩစတြေးလျတိုက်တွင် ကနဦးနေထိုင်သူ ဒေသခံ ဩစတြေးလျ တိုင်းရင်းသားများမှာ အက်ဘော်ရစ်ဂျင်နယ် (Aboriginal) နှင့်တောရက်စ် ရေလက်ကြားကျွန်းသား (Torres Strait Islander) တို့ဖြစ်သည်ဟု သမိုင်းအထောက်အထားများအရ သိရှိရသည်။ အက်ဘောင်ရစ်ဂျင်နယ် လူမျိုးစုများသည် ဩစတြေးလျတိုက်ကြီး၏ အဓိက ကုန်းတွင်းပိုင်းနေရာများ နှင့် တက်စ်မေးနီးယား တို့တွင် အစပျိုး မှီတင်းနေထိုင်ကြပြီး၊ တောရစ် ရေလက်ကြားကျွန်းသားများမှာတော့ ကွင်းစလန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ ကျွန်းများပေါ်တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြပေသည်။ နေရာဒေသအလိုက် ထိုလူမျိုးစုများသည် မတူကွဲပြားသော စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ယဉ်ကျေးမှု လက္ခဏာများရှိကြသည်။ ထိုကနဦး နေထိုင်လာသူ တိုင်းရင်သားများ တွင် တူညီသော ယုံကြည်ချက်များ၊ အစဉ်အလာ ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာ များလည်း ရှိပြီး ယနေ့တိုင် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလာကြကာ ၎င်းတို့ကို သက်ဝင်ယုံကြည် နေကြသည်။ နေ့စဉ် မိမိတို့ ဘဝရှင်သန်မှုကို ၎င်းတို့ ယုံကြည်သော အရာများက လမ်းပြပို့ဆောင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြ၏။ ထို့ပြင်သူတို့ နှစ်ပေါင်းများစွာသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သော ရေမြေသဘာဝကြီး နှင့် ၎င်းတို့ ယုံကြည်ရာ အချင်းအရာတို့သည် ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟု ခေတ်အဆက်ဆက် သယ်ဆောင်လာကြသော ပုံပြင်များက အထင်အရှားဖြစ်စေသည်။
အစောပိုင်း ဝင်ရောက်အခြေချ ဥရောပသားများပြင်ဆင်
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၇၀၀ ခုနှစ်နောက်များမှ စ၍ ဥရောပနိုင်ငံသားများသည် ယခုလက်ရှိ ဩစတြေးလျတိုက် ကုန်းမြေကြီးကို စတင်တွေ့ရှိကာ ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြသည်ဟု သမိုင်းအထောက်အထားများက ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းအထောက်အထားများအရ အစောဆုံးအနေဖြင့် ဂရိတ်ဗြိတိန်(Great Britain) နိုင်ငံသား များသည် ၂၆ ဇန်နဝါရီလ ၁၇၈၈ ခုနှစ်တွင် အကျဉ်းသားများ သယ်ဆောင်လာသော သင်္ဘောအစင်းပေါင်း ၁၁ စီးဖြင့် စတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ ထိုသင်္ဘော ၁၁ စီးကို ပထမသင်္ဘောစု - ဖတ်စ်တ် ဖလီးတ် (First Fleet) သမိုင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားကြသည်။ ထိုစဉ်က ဗြိတိန်နိုင်ငံ (Britain) ၏ တရားဥပဒေမှာ ပြင်းထန်လွန်းလှသဖြင့် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံရသူ များလှပေရာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ ထောင်များမှာ နေရာမလောက်မငှ ပြဿနာဖြစ်လာခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ (Britain) မှ စွန့်ဦးရှာဖွေ ကိုလိုနီနယ်မြေများကို စတင်တွေ့ရှိကာ သွားရောက် စူးစမ်းကြသူများစွာရှိခဲ့ရာ ဩစတြေးလျတိုက်သည်လည်း ဗြိတိန်ကိုလိုနီနယ် တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ များပြားလှသော ထောင်သွင်း အကျဉ်းချထားသူများကို ကမ္ဘာကြီး အခြားတဘက်သို့ ပို့ဆောင် နယ်မြေ ချဲ့ထွင်ခြင်းသည်သာ ပြည့်ကျပ် နေသော နိုင်ငံတွင်းထောင်များ၏ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာဖြစ်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ဖြင့် နယူးဆောက်သ်ဝေးလ်စ်ပြည်နယ် နေရာသည် ၎င်းတို့ အခြေစတင်ချရာ နေရာြဖစ်သည်ဟု သမိုင်းပညာရှင်များ သုံးသပ်သည်။
ထို ရှေးဦး အခြေချ ကိုလိုနီနယ်မြေ၊ လက်ရှိ နယူးဆောက်သ်ဝေးလ်စ်ကို ကပ္ပတိန် အာသာ ဖိလစ်ပ် (Captain Arthur Phillip) ဆိုသူက ပထမဆုံး ဘုရင်ခံ အနေဖြင့် အုပ်ချုပ်သည်။ အစောပိုင်းနှစ်များတွင် ထိုနယ်မြေသစ်၌ အခက်အခဲများစွာကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ပြီးနောက် ကိုလိုနီနယ်မြေဟု ကြေညာလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အကျဉ်းသားများသာမက ရိုးရိုး ဝင်ရောက်အခြေချလိုသူ အရပ်သားများပင် ဝင်ရောက်နေထိုင်လာခဲ့ကြရာ အဆင့်ဆင့် တိုးတက်စည်ကားလာခဲ့သည်။ တပြိုင်နက်ထဲမှာပင် တိုက်ကြီး၏ တခြားအပိုင်းများကိုလည်း ကိုလိုနီများ စတင်တည်ထောင်လာကြသည်။ အစောဆုံး သာမန်အခြေချလိုသူ အရပ်သားများသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ (Britain) နှင့် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ (Ireland) များမှ ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ ဖြစ်စဉ်သမိုင်း၊ ရိုးရာဓလေ့ နှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများသည် ၎င်းတို့ အမွေအနှစ်များမှ ဆင်းသက်ဆက်နွယ်လျက်ရှိသည်။
ထို့အပြင် ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၅၁ အတွင်း၌ နယူးဆောက်သ်ဝေးလ်စ်ပြည်နယ်နှင့် ဝိတိုရိယပြည်နယ်များရှိ ကိုလိုနီနယ်မြေများတွင် ရွှေထွက်သဖြင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ လူပေါင်းများစွာတို့သည် ထိုကိုလိုနီနယ်မြေများသို့ ရွှေတူးရန် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဥရောပသားများအပြင် တရုတ်လူမျိုးများပါ အလုံးလိုက်အရင်းလိုက် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ လူဦးရေမှာ အချိန်ကာလ ၁၀ နှစ်အတွင်း နှစ်ဆတိုးပွားလာခဲ့သည်။
ဩစတြေးလျနေ့ (Australia Day)ပြင်ဆင်
နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီလ ၂၆ရက် နေ့သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ ဩစတြေးလျနေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်သည့်အလျှောက် ထိုနေ့တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ရုံးများ ပိတ်သော နေ့တနေ့လယ်းဖြစ်သည်။ ဩစတြေးလျနေ့တွင် နိုင်ငံအတွင်း လူမျိုးစုပေါင်းစုံတို့သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံဖြစ်တည်လာရပုံနှင့် ၎င်းနိုင်ငံတွင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား ဖြစ်ရခြင်း အတွက် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့် ပျော်ပွဲများ ဆင်နွဲကြသည်။ နှစ်စဉ် ကျင်းပသည့်ပွဲများထဲတွင် ထိုနေ့သည် အကြီးဆုံးသောပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ သမိုင်းနှင့် ထိုနိုင်ငံတွင် ခေတ် အဆက်ဆက် နိုင်ငံတော်ကြီး တိုးတက်ကြီးပွားလာအောင်လုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြသော ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားများ ကို ဂုဏ်ပြုသောနေ့လယ်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မိမိတို့ လက်ရှိတွင် ခံစားရသော အကျိုးကျေးဇူးများ ကိုသိရှိကာ၊ နောင်အခါ မိမိတို့ သားစဉ်မျိုးဆက်လက်ထက်တွင် ယခုထက်မကသော ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော အနာဂတ်ကာလများရစေလိုကြောင်း ဆန္ဒပြုကာ အတူတကွ ကြိုးစားသွားလိုကြသည်။ တပြိုင်နက်တည်းတွင် နိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား ခံယူပွဲများကို ထိုနေ့မှာပင် ကျင်းပကာ ဩစတြေးလျနေ့ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများကိုလက်ဆင့်ကမ်း ဗဟုသုတပေးကြသည်။ ထိုနေ့မတိုင်ခင် တစ်ရက်အလိုတွင် ဝန်းကြီးချုပ်က နှစ်တစ်နှစ်၏ အထူးချွန်ဆုံး ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဆု (Australian of the Year Awards) ရရှိသူကို မြို့တော် ကန်ဘာရာ (Canberra) တွင် တရားဝင်ကြေညာ ဂုဏ်ပြုသည်။ အကျဉ်းချုပ်ဆိုသော် အဓိကအားဖြင့် ဩစတြေးလျနေ့သည် ဂရိတ်ဗြိတိန်တို့ ၁၇၈၈ ခုနှစ် တွင် စတင်ဝင်ရောက်ကြသော ကပ္ပတိန် အာသာ ဖိလစ်ပ် (Captain Arthur Phillip) ဦးဆောင်သည့် ပထမသင်္ဘောစု - ဖတ်စ်တ် ဖလီးတ် (First Fleet) ဆိုက်ရောက်ရာနှစ်ပတ်လည်နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်သည်။
အန်းဇာက်ခ်နေ့ (Anzac Day)ပြင်ဆင်
အန်းဇာက်ခ်နေ့ ကိုနှစ်စဉ် ဧပြီလ ၂၅ရက်တွင် ကျင်းပသည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်တွင်း ဧပြီလ ၂၅ရက် ၁၉၁၅ ခုနှစ်တွင် တူရကီနိုင်ငံ (Turkey) ၏ ဂလစ်ပ်ပိုလီ (Gallipoli)မြို့ ကမ်းခြေသို့ ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် နယူးဇီလန် နှစ်ခုပေါင်း တပ်မကြီး၊ အန်းဇာက်ခ် (Anzac) ကမ်းဆိုက်ရာနေ့ကို အစွဲပြုမှည့်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစစ်ကြီးကာလတွင်း အသက်စွန့် အမှုထမ်းဆောင်သွားကြသော ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားများကို အမှတ်ရခြင်း အထိမ်းအမှတ်နေ့ လည်းဖြစ်သည်။ အန်းဇာက်ခ်နေ့ တွင် နိုင်ငံအတွင်း ရုံးများပိတ်ပြီး အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုပွဲများ၊ ချီတက်ပွဲများ လုပ်ကြသည်။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် လူမျိုးစုများကို ကိုယ်စားပြုသော အလံများပြင်ဆင်
ဩစတြေးလျနိုင်ငံတော် ကိုယ်စားပြု အလံ
ဩစတြေးလျနိုင်ငံတော်အလံ သည် အပြာရောင်၊ အဖြူ ရောင် နှင့် အနီရောင် တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသောအလံဖြစ်သည်။ အဆိုပါအလံတွင် အရေးကြီးသောအပိုင်း သုံးခုပါဝင်သည်။
အလံ၏ဘယ်ဘက်ထိပ်ေထာင့်တွင် ယူနီယံဂျက် (Union Jack) ဟုလူသိများသော ဂရိတ်ဗြိတိန် အလံကို ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းတွေရမှာဖြစ်သည်။ ထို ယူနီယံဂျက် အလံပုံပါဝင်ရခြင်းမှာ ဩစတြေးလျတိုက်ကို ဗြိတိသျှလူမျိုးများ အခြေချမှု သမိုင်းကို ထင်ဟပ်စေချင်ဖြစ်သည်။
ယူနီယံဂျက်အလံ အောက်တည့်တည့်တွင် ဓနသဟာယ ကိုကိုယ်စားပြုသော ကြယ်ပွင့် (Commonwealth Star) ရှိသည်။ အစောပိုင်းတွင် ၎င်းကြယ်ပွင့်မှာ အစွန်း ၆ ခုသာပါရှိ၍ ထိုအစွန်းတစ်ခုစီသည် ဗြိတိသျှကိုလိုနီနယ်မြေ ခြောက်ခု (နယူးဆောက်သ်ဝေးလ်စ်ပြည်နယ်၊ ကွင်းစလန်ပြည်နယ်၊ ဝိတိုရိယ ပြည်နယ်၊ အနောက်ပိုင်း ဩစတြေးလျ ပြည်နယ်၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသကြီး နှင့် တောင်ပိုင်း ဩစတြေးလျ ပြည်နယ်) ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် တိုးချဲ့ ကိုလိုနီ ပါပူအာနယူးဂီနီ(Papua New Guinea) အပါအဝင် ကြယ်ပွင့် အစွန်း ၇ခု အဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ပါပူအာနယူးဂီနီနိုင်ငံမှာ လွတ်လပ်သော နယ်မြေဖြစ်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင်လည်း ပါပူအာနယူးဂီနီနိုင်ငံသည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှ လွတ်လပ်ရေးရယူကာ လွတ်လပ်ပြီးသောနိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ 
အလံ၏ ညာဘက်တွင် ကောင်းကင်း တောင်ဘက်အရပ်တွင် မြင်ရနိုင်သော တောင်ပိုင်းကြယ်စု (Southern Cross) ရှိသည်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာတောင်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိသောကြောင့် ထို တောင်းပိုင်းကြယ်စုကို ဗြိတိသျှလူမျိုးများ စတင်အခြေချခဲ့စဉ်ကတည်း ကောင်းကင်၌ ထင်ရှားစွာမြင်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကြယ်ပွင့်လေးပွင့်တွင် ဗြိတိသျှလူမျိုးတို့ အသိမှတ်ပြုထားသော ဂုဏ်အင်္ဂါလေးရပ်ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်း (justice)၊ အမြော်အမြင်ကောင်းရှိခြင်း (prudence)၊ သီလ သမာဓိနှင့်ပြည့်စုံခြင်း (temperance) နှင့် စိတ္တခွန်အားဗလကောင်းခြင်း (fortitude)တို့ဖြစ်သည်။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ အက်ဘော်ရစ်ဂျင်နယ် (Aboriginal) အလံပြင်ဆင်
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ အက်ဘော်ရစ်ဂျင်နယ်လူမျိုးစုများကိုကိုယ်စားပြုသော အလံသည် အနက်ရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဝါရောင်တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းအလံတွင် အရေးကြီးအပိုင်း သုံးခုပါဝင်ပြီး၊ အများအားဖြင့် ထိုအရောင်များ၏ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အလံ၏ အပေါ်ပိုင်း တစ်ပိုင်းသည် အနက်ရောင်ဖြစ်၍ ထိုအနက်ရောင်သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ အက်ဘော်ရစ်ဂျင်နယ် လူမျိုးများအား ကိုယ်စားပြုသည်။
အလံ၏ အောက်ပိုင်း တစ်ပိုင်းတွင် အနီရောင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ကမ္ဘာမြေကြီးကိုကိုယ်စားပြုသည်သာမက အက်ဘော်ရစ်ဂျင်နယ်လူမျိုးတို့ ယုံကြည်ရာ ဝိညာဉ်လောက နှင့် သူတို့ နေထိုင်ရာ ကုန်းမြေနီများ၏ ဆက်နွယ်မူကိုဖော်ကြူးထားသည်။
အလံ၏အလယ်တည့်တည့်တွင် အဝါရောင်စက်ဝိုင်းရှိသည်။ ထိုစက်ဝိုင်းအဝါသည် 'နေ' ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
တောရက်စ် ရေလက်ကြားကျွန်းသား (Torres Strait Islander) အလံပြင်ဆင်
တောရက်စ် ရေလက်ကြားကျွန်းသား အလံသည် အစိမ်းရောင်၊ အနက်ရောင် နှင့် အဖြူရောင်တို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အလံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလံ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အလံ၏ အပေါ်နှင့်အောက်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင် အစင်းလိုင်းနှစ်ခုသည် စိမ်းစိုသော ကုန်းမြေကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ထို အစိမ်းရောင် အစင်းလိုင်းနှစ်ခုကြား အလယ်တည့်တည့်တွင် အပြာရောင် နောက်ခံမှာ ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုကိုယ်စားပြုသည်။
၎င်း အစိမ်းရောင်နှင့် အပြာရောင် စပ်ကြား အပေါ်အောက်နှစ်ခုတွင် အနက်ရောင်မျဉ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းသည် တောရက်စ် ရေလက်ကြားကျွန်းသားကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အလံ၏ အလယ်တည့်တည့် အပြာရောင်နောက်ခံပေါ်တွင် ကချေသည်၏ အဖြူရောင် ဦးခေါင်းဆင်ယဉ်ထုံးတစ်ခုရှိ၍၊ ထိုသင်္ကေတသည် တောရက်စ် ရေလက်ကြားကျွန်းသား အားလုံး၏ သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို တောရက်စ် ရေလက်ကြားကျွန်းသား အားလုံး၏ သင်္ကေတ ကြားတွင်ရှိသော ကြယ်ဖြူပွင့်၏ အစွန်းများသည် တောရက်စ် ရေလက်ကြားရှိ ကျွန်းစုများကို ကိုယ်စားပြုသည်။
အဖြူရောင်သည် တောရက်စ် ရေလက်ကြားကျွန်းသားများအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး အရောင်လည်းဖြစ်သည်။
ဓနသဟာယ၏ တရားဝင် သင်္ကေတ
ဓနသဟာယ တံဆိပ်အမှတ်အသားသည် ဩစတြေးလျ ဓနသဟာယ၏ တရားဝင် သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ထိုအမှတ်အသားသည် အမျိုးသားညီညွတ်ေရးကို ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် ဩစတြေးလျ ဓနသဟာယ၏ အချုပ်အချာအာဏာရှိခြင်းနှင့် ပေါကြွယ်ဝခြင်းကို ဖော်ဆောင်သည်။ ဓနသဟာယ တံဆိပ်အမှတ်အသား၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အလယ်တည့်တည့်တွင်ရှိသော ဒိုင်းသည် ပြည်နယ်ခြောက်ခုနှင့် ပြည်ထောင်စု စည်းရုံးရေး ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ထိုဒိုင်း၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် သားပိုက်ကောင် (Kangaroo) တစ်ကောင် နှင့် အီမျူးငှက် (Emu) တစ်ေကာင်ပါဝင်သည်။ သားပိုက်ကောင် သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ မူလဇာတိဖွားသဘာဝ၏ ရင်သွေးငယ်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး၊ အီမျူးငှက်သည်လည်း ၎င်းနည်းတူ မူလကတည်း ရှိနေခဲ့ကြသောတောရိုင်းသတ္တဝါလေးများဖြစ်ကြသည်။
ထို့အပြင် ပုံတွင်မြင်ရသည့်အတိုင်း ဒိုင်း အပေါ်တည့်တည့်တွင် ရွှေရောင် ဓနသဟာယ ကြယ်ပွင့်တစ်ပွင့်ပါဝင်သည်။
အားလုံး၏နောက်ဘက်တွင် နောက်ခံအနေဖြင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုထားသော 'ဂိုးလ်ဒန်း ဝါထယ်လ်'(Golden Wattle) ပန်းပုံ ကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။
'ဂိုးလ်ဒန်း ဝါထယ်လ်'(Golden Wattle) ပန်းသည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသောပန်းဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ဘက်အခြမ်းတွင် အပွင့်များသော အပင်အသေးမျိုး ဖြစ်သည်။ ၎င်းပန်း၏အပင်မှာ နွေဦးတွင် အစိမ်းရောင်ခပ်တောက်တောက် အရွက်နှင့် ရွှေဝါရောင် ပန်းပွင့်တို့ ပွင့်ဖူးလျက် ရှိကြသည်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ပြည်နယ် နှင့် ဒေသတစ်ခုချင်းစီတွင် ၎င်းတို့ကို ကိုယ်စားပြုသောပန်းတစ်ခုချင်းစီလည်းရှိကြပြန်သည်။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသော အရောင်များပြင်ဆင်
ဩစတြေးလျနိုင်ငံကို အစိမ်းရောင်နှင့် ရွှေဝါရောင် တို့ကကိုယ်စားပြုသည်။ ထို ရွှေဝါရောင်မှာ 'ဂိုးလ်ဒန်း ဝါထယ်လ်'(Golden Wattle)ပန်းပွင့်၏ အရောင်လည်းဖြစ်သည်။ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အားကစားအသင်းများ၏ ဝတ်စုံသည် အများအားဖြင့် ထို အစိမ်းရောင် နှင့် ရွှေဝါရောင် တို့ကို အသုံးပြုထားကြသည်။
Pantone 348 C 116 C
CMYK 100%-4%-87%-18% 0%-12%-100%-0%
ဩစတြေးလျနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသော ကျောက်မျက်ပြင်ဆင်
ဩစတြေးလျနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသော ကျောက်မျက်
မဟူရာဖလား ခေါ် 'အိုပယ်လ်' (Opal) သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသော ကျောက်မျက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အက်ဘော်ရစ်ဂျင်နယ် (Aboriginal) လူမျိုးတို့ ဒဏ္ဍာရီတွင်ကား မိုးကောင်းကင်မှ သက်တန့်ရောင်စင်သည် ဤကမ္ဘာမြေကြီးကိုထိမိသောအခါဝယ် မြေကြီးတွင်တည်ရှိနေကြသော ကျောက်စိုင်ကျောက်ခဲများက အရောင်ကူးကာ ထိုမဟူရာဖလား ခေါ် 'အိုပယ်လ်'ကျောက် ဖြစ်လာသည်ဟုလည်း ယုံကြည်ကြသည်။
↑ ၃.၀ ၃.၁ အခြေခံအချိန်ဇုန် ၃ ခုမှ အနည်းငယ်သော ကွဲပြားမှုရှိသည်။
↑ Australian National Anthem။9November 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
16. Other matters – 16.3 Australian National Anthem။
"National Symbols" (PDF)။ Parliamentary Handbook of the Commonwealth of Australia (29th ed.)။ 2005 ။ 11 June 2007 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7June 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named language
↑ Religious Affiliation (RELP)။ Australian Bureau of Statistics (8 November 2017)။
↑ Collins English Dictionary။ Bishopbriggs, Glasgow: HarperCollins။ 2009။ p. 18။ ISBN 978-0-00-786171-2။
↑ Population clock။ Australian Bureau of Statistics website။ Commonwealth of Australia။ The population estimate shown is automatically calculated daily at 00:00 UTC and is based on data obtained from the population clock on the date shown in the citation.
↑ တမ်းပလိတ်:Census 2016 AUS
↑ ၉.၀ ၉.၁ ၉.၂ ၉.၃ Report for Selected Countries and Subjects: October 2020။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (April 2021)။
↑ Income Distribution Database။ Organisation for Economic Co-operation and Development။
↑ Style manual for authors, editors and printers (6th ed.)။ John Wiley & Sons Australia။ 2002။ p. 171။ ISBN 978-0-7016-3647-0။
↑ "Australian Citizenship - Our Common Bond" ကိုမှီြငမ်း။ Commonwealth of Australia။ National Communication Branch of the Department of Immigration and Border Protection (2014)။ 13 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၇ ဩဂုတ်လ ၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Flag of Australia" ကိုမှီငြမ်း။ en.wikipedia.org။ ၆ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဩစတြေးလျနိုင်ငံ&oldid=749337" မှ ရယူရန်
၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၂၊ ၁၅:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၂၊ ၁၅:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။